आफुलाई सुपरपावर बताउने भारतको यो असली तस्विर दुनियाँले देख्यो – Online Nepal
आफुलाई सुपरपावर बताउने भारतको यो असली तस्विर दुनियाँले देख्यो
May 9, 2020 623
काठमाडौं । लकडाउनपछि भारत, नेपालसहित विश्वका ठुलठुला देशहरुको वास्तविकता बाहिर आएको छ । आफुलाई महाशक्ति बनाउने होडमा लागेको भारतको तस्विर विश्वले गज्जबले देख्ने मौका पायो । जनसंख्याका आधारमा विश्वमा दोस्रो स्थानमा पर्ने भारत क्षेत्रफलका हिसाबले सातौं नम्बरमा आउँछ । तर भारतमा भएको गरिबी, बेरोजगारी पनि विश्वमाझ लुक्न सकेको छैन । अहिले फेरि भारतको अर्को एक तस्विर बाहिर आएको छ ।
महाराष्ट्र राज्यको औरंगाबाद जालनाको एक स्टिल कारखानामा काम गर्दै आएका १६ जनाको दर्दनाक मृत्यु भएको छ । यो कारखाना विगत ४५ दिनदेखि बन्द भएको थियो । दैनिक ज्याला गरेर कमाउनेहरूलाई दुई छाकको खाना अभाव हुन थाल्यो । अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार र मध्य प्रदेशका मजदुर थिए । उनीहरु सबैजना मिलेर कुनै न कुनै तरिकाले एक महिना को लागी गुजारा चलाउन सफल भए । एक महिना पुरा भएपछि ति निर्दोष मजदुरहरुलाई सामाजिक संगठनहरू र सरकारको आश थियो ।
तर, पेट भर्न यो मद्दत केवल दुई देखि तीन दिनमा एकचोटि हुँदै थियो । यस बीचमा एउटा खबर आयो । सरकारले अरुंगाबाद वा भुसावलबाट अर्को राज्यबाट मजदुर पठाउन रेल चलाउन थालेको छ । जालनादेखि औरंगाबादको दूरी ५० किमी छ । मध्य प्रदेशका २० जना मजदुरहरू रेल ट्रयाकमा आइपुगे । बाँकी सबै १५० रोटी र टिफिन अचार थियो । तर १६ जनाका लागि यो यात्रा अन्तिम यात्रा साबित भयो । उनीहरुले आफैंले साथमा ल्याएको रोटी खान पाएनन् ।
कामदारहरूले सोचे कि उनीहरू शुक्रबार घर पुग्नेछन् । बिहीबार साँझ, तिनीहरूले १५० रोटी बनाए । टिफिनमा चटनी (अचार) पनि थियो । अचार यसकारण पनि आवश्यक थियो कि सुख्खा रोटी सजिलै मुखबाट पेटमा जान सकोस् । केही समय पछि सबै उनीहरुको गाउँ जान भनेर भुसावलको लागि प्रस्थान गरे । सबैको उमेर २१ देखि ४५ वर्ष बीचको थियो । कोही शहडोल त कोही कट्टनीका थिए । जब उनीहरु औरंगाबाद जिल्लाको करामाड पुगे तब रात अन्धकार थियो । त्यहाँ उनीहरुले खाना खाएपछि केहि आराम लिन खोजेका रहेछन् ।
एक मजदुर सज्जन सिंह जो यसै समुहमा थिए । उनी घाइते भएका छन् । उनले भने, ‘मलाई भोक लागेको थियो सर । लिगमा बसेर खाना खान शुरू गर्यौ । हामीले यस ठाउँलाई स्वच्छ र सुरक्षित देख्यौ । खान सकियो, कोही चाहन्थे यात्रा फेरि सुरु होस् । तर, केहिले धेरै थाकेको भन्दै आराम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । त्यसपछि सबैको सम्झौता आराम गर्ने भन्ने भएको थियो । भोको पेटले रोटी पायो । त्यसकारण, लिगको सिरानी र गिट्टीको ओछ्यान बनाएर हामी त्यहाँ सुत्यौ । तर जब हाम्रो निन्द्रा खुल्यो तब देखिएको दृश्य भ यङ्कर थियो । इन्टरलाल मेरो नजिकै सुतिरहेको थियो । उसले मलाई तान्यो । म जीवित छु ।’
सज्जन अझै थप्दै भन्छन्, ‘आँखा खोलियो, त्यसपछि होश आयो । मैले मेरो झोला रेलमा फसेको देखे । हामीले सोच्यौं रेलहरू बन्द छन् । त्यसकारण, त्यहाँ लिगमा कुनै गाडी आउँदैन । वरिपरि झाडीहरू थिए । त्यसपछि रेलको लिगमा नै निदाउने विचार आयो । रेल रोकेपछि, सबै कुरा सकियो । १६ साथीको टु क्रिएको श रीर लिगमा रहेको थियो । कसैलाई पनि चिन्न गाह्रो थियो ।’
सज्जनले भने, ‘सुरुमा मैले महसुस गरें कि मैले नराम्रो सपना देखेको छु । एक क्षणमा, वास्तविकता पुष्टि भयो । २० मध्ये चार जना बाँचे । डरले थोरै छुटकारा पायो । लिगबाट केहि टाढाको घर पुग्यौ । मद्दतको लागि सोध्यौ तिनीहरूले हामीलाई पानी पिउन दिए । त्यसपछि पुलिसलाई खबर गर्‍यो ।’
आधा घण्टा पछि पुलिस आइपुग्यो । उसले आफ्नो काम सुरु गर्यो । वीरेन्द्र घाँटीलाई सम्हाले र आफ्नो भिजेको आँखा सफा गरेर निर्मल आकाशतिर हेर्दछन् । अनि भन्छन, ‘जोसँग मसँग केही घण्टा अघि बसे उनीहरूले रोटी खाए । अब तिनीहरूका मृत शरीरहरू मेरो अगाडि छन् । कोही मेरो धेरै नजिकका साथीहरू थिए । अब, उनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई के भन्ने छन् ? म कसरी उनीहरूको सामना गर्न सक्छु ? मेरो फोन, झोला सबै हराइरहेको छ । पछाडि चोटपटक लागेको छ । यो घाउ निको हुनेछ । तर, मुटुमा जन्म भएको घाउ सधै रहनेछ ।’
Prevउदयपुरमा थप एक जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या ११० पुग्यो
Nextतल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना
मेनुका पौडेलले मिडिया मार्फत खु,लाशा गरिन रमेश प्रसाईको यस्तो राज (भिडियो सहित)
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62151)